Ukukhethwa kweenoveli ezimnandi kakhulu
Umfazi wam endimthandayo nguSamantha Downing
Kwizihlandlo ezininzi, abokuqala ukukhohliswa kwezona ziganeko zoyikekayo, kwanaxa bengacingelwanga, zizalamane zombulali. Kwaye intsomi ithathele ingqalelo ngamaxesha ahlukeneyo ukwenza ukuba sifumane loo mbono wento engenakwenzeka. Ukungena nzulu, yonke into ihlala iza kuthi ngokwembono ...
Intlambululo-miphefumlo, nguJon Sistiaga
Kusenokwenzeka ukuba eyona nto imbi kakhulu ayisosihogo kwaye nezulu alikho mbi kangako. Xa uthandabuza, iPurigatory inokuba nayo yonke into kwabo bangagqibelisi ukwenza isigqibo. Into yeminqweno engenakwenzeka okanye uloyiko olugqithisileyo; yeenkanuko ezingenalusu...
Iincwadi ezi-3 ezigqwesileyo nguCamilla Läckberg
Incwadana yolwaphulo-mthetho yaseNordic eCamilla Läckberg yenye yeentsika zayo ezomeleleyo. Enkosi kuCamilla kunye neqaqobana labanye ababhali, olu hlobo lomcuphi luye lwaveza indawo efanelekileyo elizweni. Iya kuba ngumsebenzi olungileyo kaCamilla kunye nabanye abafana naye ...
IsiXeko sabaPhilayo, nguNicola Lagioia
Ukufika ummelwane monstrosities ezingalindelekanga. Oogqirha baseJekyll abasenokuba abakazazi ukuba banguMnu Hyde. Kwaye xa bekhona, asikuko ukuba bekukho naluphi na utshintsho. Iyakuba ngenxa yelo lizwi lakudala elinokwenza ulusu lwakho lume “ndingumntu kwaye akukho nto yasemzini yamntu kum”, kuba...
Umdlalo wokugqibela, nguJD Barker
IBhayibhile sele ibonisile kweso sicatshulwa "Qui amat periculum, in illo peribet". Into enje ukuba wonke umthandi wengozi uphela etshabalala ezingalweni zakhe (inguqulelo yasimahla nge). Kodwa ukwehla kukuba andazi ukuba yintoni ebuhlungu. Ngokukodwa ngokobuphi ubuntu okanye ngokwantoni ...
Iintsuku Esizishiyileyo, nguLorena Franco
Indlela ecetywayo yokufikelela kwi-countdown. Ixesha ngalinye linokuphelelwa kwalo kwaye ubukho bobukho busintywilisela kuloo manzi anesaqhwithi semfihlakalo, inkolo okanye uloyiko olubalulekileyo oluphawula imihla yethu. Ukuphila kuzama ukungabonwa ngumvuni ombi. Ngokuba ukufa...
Isibhengezo, nguRosa Blasco
Ukusuka eCassandra kunye neempawu zakhe ezimnyama ekungekho mntu wakholwayo, uloyiko luhleli kuphela kwesilumkiso ngokuchasene nekamva elimfiliba elizayo. Amabali amaninzi amabhinqa abhaliwe malunga nombono welo thuba okanye uvakalelo lwesithandathu. Kungenxa yokuba ngabo bonwabela ngokwembali oko ...
Ixesha likaJohn Grisham lokuXolelwa
Umbuso wamakhaya okhuseleko eMississippi ahlobo lomdlalo omnyama waseMelika ophucukileyo. Kwaye uJohn Grisham unomdla wokubona ezona zinto ziphikisanayo ezinzulu phakathi kwenkululeko yokuziphatha yaseNtshona kunye neendawo ezinamandla zokuphendula ezinje ngeli lizwe lasemazantsi ...